Kooxda Manchester United oo ugu dambeyn heshiis rikoor ah ku dhammaystirtay saxiixa Harry Maguire – Gool FM
(Manchester) 02 Agoosto 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshiis ku kacaya 85 milyan oo gini ku dhammaystirtay saxiixa daafaca dhexe ee naadiga Leicester City, Harry Maguire.
Jariiradda Telegraph ayaa warinaya in Kooxda Red Devils oo in muddo ah ku raad-joogtay daafacan dhexe ee reer England ay ugu dambeyn gacanta ku soo dhigtay kaddib markii ay Naadiga Foxes lagu naanayso miiska u saartay 85 milyan oo gini.
Manchester United ayaa horay looga soo diiday dalab 70 milyan oo gini ahaa oo ay ka gudbisay Harry Maguire, waxaana warbaahinta Ingiriisku ay shalay daabaceen in Man Utd ay dalab qaado ama ka tag ah hordhigtay kooxda Leicester City, dalabkaasoo ku kacayay 80 milyan.
Yeelkeede, hadda waxa ay labada kooxood ee Leicester City iyo Manchester United isku afgarteen 85 milyan oo gini, waxaana kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole ay qorsheynaysay inay la laabtaan dalabkooda maalinta Isniinta ah haddii xilligaas ka hor aysan aqbalin kooxda Leicester.
Heshiiskan 85-ka milyan oo gini ah oo u muuqa mid dhaqan galay oo Harry Maguire uu ugu wareegayo garoonka Old Trafford ayaa xiddigan reer England ka dhigaya daafaca ugu qaalisan Adduunka, waxaana uu ka sare mari doonaa heshiiskii 75-ka milyan ee gini ahaa oo ay Liverpool kula soo wareegtay difaaca reer Holland ee Virgil van Dijk.
Shalay ayay ahayd markii Maguire laga saaray tababarka kooxda Leicester City, isagoo aan ka qeyb qaadan doonin kulanka saaxiibtinnimo oo ay kooxda Liecester caawa la leedahay naadiga Atalanta, maadaama uu dhammaysirayo heshiiska uu ugu biirayo Manchester United.
Haddii Man United ay ku dhawaaqdo saxiixa Harry Maguire waxa uu noqonayaa saxiixii saddexaad ee xagaagan ay sameyso kooxda ka arrimisa Old Traffrod kaddib, Aaron Wan-Bissaka oo ay kala soo wareegeen Crystal Palace iyo Daniel James oo ay ka soo qaateen kooxda Swansea City.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska Harry Maguire ayaysan weli ku dhawaaqin labada kooxood ee Leicester iyo Man United, balse warbaahinta Ingiriiska ayaa warinaysa in kooxda Red Devils ay la wareegtay daafacan reer England, isla markaana la filayo in maalmaha yar ee soo aaddan lagu dhawaaqi doono inuu u wareegay kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford.
Bruno Fernandes oo ka tagay xarunta tababarka Sporting Lisbon… (Kooxdee ku sii jeedaa?)